कस्तो बित्दैछ आज तपाइँको दिन ? यस्तो भन्छ राशिफल - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो बित्दैछ आज तपाइँको दिन ? यस्तो भन्छ राशिफल
वि.सं. २०७६ असार ३०। सोमबार। इ.स. २०१९ जुलाई १५। ने.सं. ११३९ दिल्लाथ्व। आषाढ शुक्लपक्ष। चतुर्दशी, २५ः२५ उप्रान्त पूर्णिमा।उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) ९८४१३५२१६४
माहोल रमाइलो रहनेछ। प्रयत्न गर्दा आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। मानसम्मान प्राप्त हुनुका साथै सम्मानित कामको यश लिने अवसर छ। व्यवसायको सन्दर्भमा रमाइलो यात्रा हुनेछ। तर, मनोरञ्जनमा अलमलिँदा चिताएको काम रोकिन सक्छ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिन छाड्नेछन्। बलजफ्ती गर्ने बानीले वादविवाद निम्त्याउन सक्छ, सजग रहनुहोला।
याे पनि पढ्नुस राशिफल अनुसार आज तपाइँको भाग्य कस्तो ? हेर्नुस्
हल्लाको पछि लाग्दा दुस्ख पाइनेछ। अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दुस्ख दिनेछन्। व्याहारिक समस्याले योजना रोकिन सक्छ। कामको चाप बढ्नेछ भने स्वास्थ्यले त्यति साथ नदिन सक्छ। मिहिनेतको नतिजा चित्तबुझ्दो नआउन सक्छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले अग्रता दिलाउन सक्छ।
परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ। तापनि, मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन्। मिहिनेतले फाइदा दिलाउनेछ। अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुपर्ला। ]
अवसर आए पनि बेलामा होस नपुर्याउँदा समस्या आउनेछ। आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिने हुँदा सञ्चित रकम खर्चनुपर्ला। सामान्य आम्दानी भए पनि काम पूर्ण सम्पादन नहुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। शुभचिन्तकलाई बेवास्ता गर्दा पनि दुस्ख पाइनेछ। खर्च हुने डरले सताउन सक्छ।
याे पनि पढ्नुस कुन राशिका केटीहरू हुन्छन् समर्पित जीवनसाथी ?